Football Khabar » दक्षिण अमेरिकी फुटबलको ‘महाकुम्भ’ कोपा अमेरिकाबारे सम्पूर्ण जानकारी !
दक्षिण अमेरिकी फुटबलको ‘महाकुम्भ’ कोपा अमेरिकाबारे सम्पूर्ण जानकारी !
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको महादेशस्तरीय सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा आजको ठीक ११ दिनपछि सुरु हुँदैछ । गत माघ ११ गते प्रतियोगिताको ड्र सार्वजनिक भएको थियो । यसपटक हुन लागेको प्रतियोगिता ४६औं संस्करणको हो ।
विभिन्न १२ देशलाई पट १, पट २, पट ३ र पट ४ गरी ४ पटमा राखेर विभिन्न तीन समूहमा टोली विभाजन गरिएको छ । जहाँ हरेक समूहमा ४–४ टोली रहेका छन् । जसमा साबिक विजेता टोली चिलीले उरुग्वे प्रतिस्पर्धी पाएको छ । सोही समूहमा दक्षिण एसियाली फुटबलको ‘पावर हाउस’ भनिने जापानसमेत रहेको छ ।
पछिल्ला संस्करणमा फाइनलमा पराजित भएको लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनाले कोलम्बिया प्रतिस्पर्धी पाएको छ । सो समूहमा पराग्वे पनि छ । अर्को समूहमा प्रतियोगिता आयोजक देश ब्राजिल छ । उसले आफ्नो समूहमा पेरु प्रतिस्पर्धी पाएको छ । यहाँ प्रतियोगिताबारे सम्पूर्ण जानकारी दिइएको छ ।
यस्तो छ ड्र :
समूह ए : ब्राजिल (आयोजक), पेरु, भेनेज्वेला, बोलिभिया
समूह बी : अर्जेन्टिना (साबिक उपविजेता), कोलम्बिया, पराग्वे, कतार (आगन्तुक),
समूह सी : उरुग्वे, चिली (साबिक विजेता), जापान (आगन्तुक), इक्वेडर
कोपामा जापान र कतारले कसरी प्रवेश पाए ?
कहिलेबाट हुनेछन् खेलहरू ?
कोपा अमेरिका–२०१९ आगामी जुन १४ बाट सुरु हुनेछ । सो दिनबाट समूह चरणका खेल सुरु भएर जुन २४ सम्म हुनेछन् । त्यसपछि नकआउट चरणका खेल भने जुन २७ बाट सुरु हुनेछन् । प्रतियोगिता ब्राजिलका विभिन्न ५ सहरमा आयोजना हुनेछ ।
समूह चरणका खेलहरू – जुन १४ देखि जुन २४ सम्म
क्वार्टरफाइनलका खेलहरू जुन २७ देखि जुन २९ सम्म
सेमिफाइनलका खेलहरू – जुलाई २ देखि जुलाई ३ सम्म
तेस्रो स्थानका लागि हुने खेल – जुलाई ६ मा
फाइनल खेल – जुलाई ७ मा
प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा जुन १४ मा आयोजक ब्राजिल बोलिभिया खेल्नेछन् । त्यसपछि अर्को दिन हुने दोस्रो खेलमा भेनेज्वेला र पेरु खेल्नेछन् । प्रतियोगिता आयोजना हुने देश र नेपालको समय फरक पर्ने भएकाले नेपाली समयअनुसार भने यी खेल बिहानीको समयमा हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७६, सोमबार १२:१७